ကောင်းကင်ကို: စိတ္တရလေခါ (ဆရာ ပါရဂူ) ...Chitralekha (Bhagwati Charan Verma) (Download Link)
စိတ္တရလေခါ (ဆရာ ပါရဂူ) ...Chitralekha (Bhagwati Charan Verma) (Download Link)
ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ ဆရာ ပါရဂူကို ဒီနေရာကနေ ဂါရဝ ပြုလိုက်ပါတယ်။
ကျနော် ဒီ စိတ္တလေခါ ဝတ္ထုကို ebook လိုက်ရှာနေတာ ကြာပါပြီ။ ရှာလို့ မရတဲ့အဆုံး မနှစ်က အောက်တိုဘာလ လောက်တုန်းက ရန်ကုန်ကနေ လှမ်းမှာလိုက်ပါတယ်။ blog မှာ ရိုက်ပြီးတင်ဖို့လည်း ဇန်နဝါရီလောက်ကတည်းက စိတ်ကူးဖြစ်ပေမယ့် မစဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ အခုတော့ အတော်ပါပဲ။ ဒီနေ့ google မှာ ထပ်ရှာကြည့်လိုက်တော့ mmcybermedia.com က တင်ထားတာကို တွေ့ပါတယ်။ mmcybermedia.com ကိုလည်း ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။
ဒီဝတ္ထုက “Bhagwati Charan Verma” ရဲ့ “Chitralekha” ဝတ္ထုကို ဆရာပါရဂူ ဘာသာပြန်ထားတာပါ။ အတွေးအခေါ်တွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေတဲ့ စာအုပ်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာ့စာပေလောကမှာ တော်တော် ဂယက်ရိုက်ခဲ့တဲ့ ဂယက်ရိုက်နေတဲ့ စာအုပ်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အောက်မှာ အမြည်းလေး ဖော်ပြထားပါတယ်။ download link လည်းအောက်ဆုံးမှာ ပေးထားပါတယ်။
“စိတ္တရလေခါ” ဝတ္ထု ဖတ်ပြီးသော အခါ “မကောင်းမှု ဆိုတာ ဘာလဲ” ဆိုသည့် ပြဿနာနှင့် ပတ်သတ်ပြီး၊ စာဖတ်သူ ကိုယ်တိုင် ဆုံးဖြတ်ချက် ကျကောင်းကျသွားလိမ့်မည်။ သို့တည်းမဟုတ် “မကောင်းမှု ဆိုတာ ဘာလဲ” ဟု စာဖတ်သူကိုယ်တိုင် တဖန် ပြန်စကောင်း စပေလိမ့်မည်။ (စာအုပ်နောက်ကျောဖုံး)
အဲဒီ့ဘုရားသခင်ဟာ အမှန်တရား ဖြစ်တာတော့ ဟုတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူဟာ ဘယ်လောက်တောက်ပ နေသလဲ ဆိုရင် သူ့ရှေ့မှောက်မှာ လူသားရဲ့ မျက်လုံးဟာ ပွင့်နေလို့ မရဘူး
ဒါပေမယ့် ယောဂီ၊ ကျုပ်တို့ ပူဇော်နေတဲ့ သင်တို့ ကျုပ်တို့ရဲ့ ဘုရားသခင်ဟာ အဲဒီ့ဘုရားသခင်နဲ့ တခြားစီပါ။ သင်တို့ ကျုပ်တို့ရဲ့ ဘုရားသခင်က စိတ်ကူးယဉ်ထားတဲ့ ဘုရားသခင်ပါ။ ကိုယ့်လောဘ ကိုယ့်လိုအပ်ချက် ပြည့်ဝရေးအတွက် လူ့လောကက အဲဒီ့ ဘုရားသခင်ကို ပြုလုပ်ဖန်တီးထားတာပါ
အဲဒီ့ဘုရားသခင်ဟာ လူ့လောက လူ့အဖွဲ့အစည်း အမျိုးမျိုးကိုလိုက်ပြီး အသွင်အမျိုးမျိုးရှိတယ်။
တနေ့ မနက်ကျတော့ ရှေ့ဘက် ခပ်လှမ်းလှမ်းမှာ ရွှေတောင်တစ်တောင်ကို တွေ့မြင်ရတယ်။ ကျုပ် အရူးပမာ လှမ်းအော်လိုက်တယ်။ “ဆရာအရှင်၊ ရှေ့ကဟာ ကုဝေရ နတ်မင်းရဲ့ ရွှေတောင် မဟုတ်လား”
ရသေ့မြတ်က ကျုပ် ရူးပုံ အပုံကို ရယ်နေတယ်။ “အဲဒါ ဟိမဝန္တာတောင်ပေါ့။ ဆီးနှင်းပေါ်မှာ နေရောင်တွေ တောက်ပနေတယ်။ အဲဒါကြောင့်မို့ ရွှေလို့ မင်းအမှတ်မှားနေတာ။”
မိမိရဲ့ အပြစ်ကို ဂုဏ်လို့ မြင်တာဟာ ကမ္ဘာလောကရဲ့ စနစ်တခုလို ဖြစ်နေပြီ။
ဒီမြက်ခင်းထဲမှာ ပိုးမွှားတိရစ္ဆာန်တွေ ဘယ်လောက်ရှိနေတယ် ဆိုတာကိုကော ဒေဝီ သတိပြုမိရဲ့လား။ ပြီးတော့ မြက်ခင်းမှာ စိုထိုင်းနေတဲ့ အငွေ့တွေ ရှိတယ်။ အဲဒီ့မြက်ခင်းပေါ်မှာ ခပ်ကြာကြာအိပ်နေမယ်ဆိုရင် ဒေဝီအအေးမိမှာ ဧကန်မုချပဲ။ ဒေဝီ…သဘာဝဆိုတာ အဆင်ပြေတဲ့အရာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး
ဒေဝီစိတ်ဝင်စားနေတဲ့ ဒီဥယျာဉ်ကိုယ်တိုင်ကိုက လူလုပ်ထားတဲ့ အတုသာဖြစ်တယ်။ တကယ့်အတကယ် သဘာဝ အစစ်ကို မြင်ချင်သပဆိုရင် တောနက်ထဲကိုသာ သွားပါ။ အဲဒီ့မှာ ခြင်္သေ့တွေက သွေးဆာနေတဲ့ လျှာနဲ့ လှည့်ပတ်သွားလာ နေကြတယ်။ အဲဒီ့မှာ အကြောင်းမဲ့သက်သက် လူကို ကိုက်ပြီး သေမင်းခံတွင်းထဲ ပို့မယ့် မြွေတွေ မြက်တောထဲမှာ အဆင်သင့် ရှိနေကြတယ်။
သခင်၊ အမှန်ဆိုတာ ဘာလဲ။ အမှန်ဆိုတာကို ဘယ်တုန်းက သိရဖူးလို့လဲ။ ပတ်ဝန်းကျင် အခြေအနေနဲ့ လိုက်လျောညီညွတ်ခြင်းရဲ့ ဒုတိယ အမည်နာမကိုပဲ အမှန်လို့ ခေါ်ကြခြင်း ဖြစ်တယ်။ ပတ်ဝန်းကျင် အခြေအနေဆိုတာ အခါခပ်သိမ်း တမျိုးတစားတည်း ရှိနေတာမှ မဟုတ်ပဲ။
ကျုပ်တို့ဟာ နေရာဌာနကို သဘောကျတာ မဟုတ်ပါဘူး။ နေရာဌာန ဆိုတာ ရုပ်ဝတ္ထုသက်သက်သာ ဖြစ်တယ်။ ကျုပ်တို့သဘောကျတာ နှစ်သက်တာက ကျုပ်တို့နဲ့ ဟပ်မိနေတဲ့ ကျုပ်တို့ကျင့်သားရနေတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် အခြေအနေဖြစ်တယ်။ လူတိုင်းလူတိုင်းဟာ မိမိတို့ မွေးဖွားလာတဲ့ မိမိတို့ ကြီးပြင်းလာတဲ့နေရာ ဌာနကို သဘောကျတယ်။ အဲဒီ့နေရာဌာနမှ အမြဲတစေ နေလာခဲ့တဲ့အတွက် အပေါင်းအဖော်ဆိုတာလည်း အဲဒီ့နေရာမှာပဲ ရှိနေတယ်။
သဘာဝ မကျတဲ့နည်းလမ်းတိုင်းဟာလည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်ဖြတ်ခြင်း မဟုတ်ဘူး။ ………ကမ္ဘာဦးလူတွေက အဝတ်မဝတ်ကြဘူး။ သစ်သီးသစ်ဥကိုသာ စားတယ်။ အဲဒါ သဘာဝကျတဲ့ အရာဖြစ်တယ်။ အဝတ်ကို ဝတ်တာဟာ သဘာဝကျတဲ့ အရာမဟုတ်ဘူး။
ကမ္ဘာလောကမှာ မကောင်းမှုဆိုတာ ဘာမှ မဟုတ်ဘူး။ မကောင်းမှုဆိုတာ လူ့အမြင် တဦးနဲ့ တဦး မတူခြင်းရဲ့ အခြား အမည်နာမ ဝေါဟာရ စကားလုံးမျှသာ ဖြစ်တယ်။
Posted by Kaung Kin Ko at 1:50 PM
Labels: စိတ္တရလေခါ, ဆရာပါ
I'm gonna download and read it when I am back home, A kin. Thanks for sharing. I have never read that before. THANKS again.
ကျေးဇူး ကမ္ဘာပါ ကိုကောင်းရေ။
"စိတ္တရလေခါ " ကို အွန်လိုင်းမှာ ညွှန်းပေးလို့.. ဒါပေမဲ့ဗျာ
ပြန်ဖတ်ရမှာတောင် ကြောက်တယ်.. ကိုယ် တိုင်အဲဒီအထဲ ပြန်ရောက်ရင် မခံစားနိုင်တော့ဘူးးးးးးးးးးးးး ဗျ
I would also like to read Sayar Paragu's "Min hint Pyithu".
I'm new to developing sites and I was wondering if having your website title related to your content really that crucial? I notice your title, "Blogger: ကောင်းကင်ကို " does appear to be spot on with what your website is about yet, I prefer to keep my title less content descriptive and based more around site branding. Would you think this isagood idea or bad idea? Any assistance would be greatly valued.
Also visit my web page - arion
San Rain said...
စိတ္တရလေခါ (ဆရာ ပါရဂူ) ...Chitralekha (Bhagwati Cha...